Jeôgrafian'i Roanda - Wikipedia
Ny jeôgrafian'i Roanda dia faritan'ny maha tany mitoka-monina ity firenena ity ao amin'ny faritry ny Farihy Lehibe, izay tsy manana sisin-dranomasina. Ao Afrika Afovoany sy Afrika Atsinanana no misy an'i Roanda, izay firenena manana velaran-tany mirefy 26 338 km² ka isan'ireo firenana kely indrindra aty Afrika.
1 Ny tany sy ny toetany
1.1 Ny vohon’ny tany sy ny rano
2 Ny zava-manana aina
2.1 Ny zavamaniry sy ny biby
2.2 Ny mponina
Ny vohon’ny tany sy ny rano[hanova | hanova ny fango]
Manana velarana mirefy 26 338 km² i Roanda ka isan’ireo firenena afrikana kely velarana indrindra. Ahitana tendrombohitra avo maro milahatra amin’ny tsipika izaran’ireo rano ao amin’ny lemaka andalovan'ny ony Nily sy ny an’ny ony Congo. Ao andrefana no ahitana ny tangorom-bohitra manana haavo mirefy 2 740 m, izay miezinezina eo akaikin’ny farihy Kivu (1 460 m) sady mitomandavana mankany amin’ireo tendrombohitr’afotroan’i Virunga izay ahitana ny tendrony dia ny afotroa Karisimby (4 507 m). Ao koa ny lembalemba ao afovoany izay manana salan-kaambo 1 700 m, vakivakin’ny tanimbary sy ny lohasaha ety sy lalina totofan’ny antsanga. Ao antsinanana mitodika mankany amin’ny sisintany manasaraka azy amin’i Tanzania dia ahitana fatrana sy farihy ary honahona mifandimby amin’ny moron’ny renirano Kagera, izay lava indrindra amin’ny rano manompo an’i Nily.
Toetany antonona ny toetann’i Roanda, toetany mampiavaka ny faritra atsimon’ny fehiben-tanysy noho ny haambo misy azy. Manana fizaran-taona roa ny tsingerin-taona, ny iray izay fohy kokoa dia mitranga amin’ny volana Janoary fa ny iray lava kokoa dia manomboka amin’ny volanba Mey ka mifarana amin’ny volana Septambra. Tsy mitovy ny fitsanjaran’ny rotsak’orana amin’ny faritra samihafa. Amin’ireo faritra an-tampon-tendrombohitra no be rotsak’orana (mihoatra ny 2 000 mm izany eo amin’ny tampon'i Kôngô-Nily) nefa mihena izany eny amin’ny lembalemba any atsinanana (787 mm).
Miova eo anelanelan’ny 19 °C (ao Kigali) sy 22,8 °C (ao amin’ny faritry ny farihy Kivu) ny salan’ny maripana anatin’ny taona, ka lehibe ny elanela-maripana amin’ny andro sy ny alina eny an-tendrombohitra izay mety mahatratra 0 °C.
Ny ala-nanahary izay be velarana taloha dia tsy hita intsony raha tsy ao amin’ireo tendrombohitra ao andrefana (izay ahitana velaran-tanin-javamaniry mifanao tohatra arakaraka ny hahavon’ny toerana, sady tsy hita intsony rehefa eny an-tampon’ireo afotroa na volokano) sy eny amin’ny faritry ny farihy Kivu. Lonaka ny tany vôlkanika. Hita eny ny hazo kininina izay novolena maro mba hiarovana ny nofon-tany, ny akasià (fr.: acacia) ao amin’ireo fatrana sy ny fambolena palmie fanamboara-menaka (fr.: palmier à huile). Ao avaratra-andrefana dia ahitana rajako gôrila izay mbola niaina amin’ny maha bibidia azy eny amin’ny tehezan’ireo volokano Virunga talohan’ny zava-nitranga tamin’ny taona 1994. Ao atsinanana no misy ny valan-javaboarin’i Kagera izay ahitana biby maro toy ny elefanta, ny lalomena, ny voay, ny leôparda, ny andiana zebra ary ny antilôpa.
I Kigali amin'ny andro alina Tamin’ny taona 2008 dia niisa 10 200 000 any ho any vahoaka roandey raha 8 000 000 tany ho any izany tamin’ny taona 1991, mahatratra 12 712 431 tamin’ny taona 2020. Talohan’ny fifamonoan’ny samy Roandey dia i Roanda no isan’ireo firenenena misy mponina makitroka indrindra aty Afrika: mponina miisa 301mp/km² tamin’ny taona 1991, 483 mp/km² tamin’ny taona 2020. Ny ankamaroan’ny Roandey dia miaina any amin’ny faritra ambanivohitra misy tantsaha misahana fiompiana sy fambolena miparitaka eny amin’ireo havoana maro; ny taham-pahamaroan’ny tanan-dehibe dia isan’ny ambany indrindra maneran-tany (5%). Ankehitriny dia tsy misy olona firy ny any ambanivohitra.
Sahala amin’ny an’i Borondy ny taharon’ny vahoaka roandey: ao ireo Hoto (Hutu) mpamboly (85%n’ny Roandey talohan’ny fifamonoana), sy ny Totsy (Tutsi) sy ny Toà (Twa) izay samy mpiompy, ary ny Pigmea izay heverina ho mponina voalohany. Nisedra fifindrà-mponina lehibe i Roanda hatramin’ny nahazoany fahaleovan-tena (dia ireo Totsy mpialokaloka aloha, avy eo ireo Hoto nanomboka tamin’ny taona 1994 tamin’ny fiverenan’ny Totsy), ka nahatonga fiovana mahery vaika teo amin’ny fiarahamonina roandey. Vokatr’izany dia haingam-piova koa ny antontan’isa momba ny mponina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeôgrafian%27i_Roanda&oldid=998337"